सस्तोमा घर निर्माण गर्न हामी तयार छौं
बिहीवार, भाद्र ९, २०७३
बलियो घर बनाउनको लागि राम्रो र गुणस्तरीय सामानको आवश्यकता पर्दछ । त्यो सामानको जोहो गर्दै घर बनाउने काम गरि आम नेपालीको मनमा बस्न सफल निर्माण संसार प्रा.लि. घर बनाउन चाहिनेहरुको लागि एउटा विश्वाशिलो आधार बन्दै गईरहेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बिहिबार मात्रै दोस्रो सुरक्षित घर निर्माण सम्बन्धि बृहत प्रदर्शनी सकिएको छ । भदौ ३० देखि सुरु भएको सो प्रदर्शनीमा घरायसी कामकाजका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरुको प्रदर्शनी राखिएको थियो । विभिन्न घर निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीको आयात तथा निर्यात गर्दै आईरहेको निर्माण संसार प्रा.लि.ले पनि आफ्नो संस्थाको कामको बारेमा जानकारी दिन स्टल राखेको थियो । त्यसै अवसरमा संस्थाको कामको विषयमा जानकारी लिन संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक नारायण रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
– निर्माण संसारको काम के हो ?
यो एउटा घर बनाउन चाहिले सम्पूर्ण सामग्री जोहो गर्ने र घर निर्माण गर्ने संस्था हो । जसले सस्तो मुल्यमा आकर्षक घर निर्माण गर्न सक्षम र सवल रहेको कुरा म आम उपभोक्ता माझ राख्न चाहन्छु । विगत २० वर्षदेखि यही काममा लागि परेको हुनाले अहिले बजारमा हाम्रो संस्थाले गरेको कामको मुल्यांकन उपभोक्ताले राम्रै गरिरहेको मैले पाईरहेको छु ।
– कस्तो खालको घर निर्माण गरिराख्नुभएको छ ?
हामीले न्यनतम मुल्यमा राम्रो घर निर्माण गर्ने गरेका छौ । विशेषतः भूकम्पपछि हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको लागि काम थालनी गरेका छौं । हामीले कम शुल्कमा गुणस्तरीय घर निर्माणका लागि जुन काम गरिरहेका छौं आम उपभोक्ताले त्यो मन पराईराख्नुभएको महशुस गरेका छौं । त्यो नै हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने ठानेका छौ ।
– निर्माण संसारले अहिले कहाँ–कहाँ घर बनाईरहेको छ ?
भूकम्पपछि हामीले विभिन्न जिल्लामा काम गरिरहेका छौं । जस्तो की काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपालचोक, रसुवा, काठमाडौंमा त्यस्तो घर बनाएका छौं । अहिले हामीले बनाएको घरलाई मन पराईदिएर घर बनाउनको लागि आवश्यक सहयोग माग्न आउनेको संख्या बढ्दो मात्रमा रहेको छ । हामीले रसुवामा हाम्रै स्रोत र साधनबाट निःशुल्क रुपमा हेल्थपोष्ट बनाउने काम गरिरहेका छौं । केही हस्तान्तरण पनि गरिसकेका छौं । त्यस्तै काठमाडौमा रहेको स्पार्क हेल्थ होम हस्पिटलको भवन पनि हामीले नै तयार गरेका हौं भने गोदावरीमा रहेको आशा नेपाल नामक संस्थाको भवन पनि हामीले नै तयार गरेका हौं ।
– एउटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कति समय र खर्च लाग्छ ?
हामीले चार कोठाको एउटा भवन बनाउन ३० दिन लाग्छ । जुन १० लाख देखि बढीमा १६ लाखसम्ममा तयार हुन्छ । साउण्ड प्रुफ, आगोले नटिप्ने, रंग रोगन गर्नु नपर्ने, काठभन्दा आधी सस्तो हुन्छ । वर्षौसम्म ढुक्क र आकर्षक देखिने खालको हुन्छ । त्यस्तै एसी चलाउदा कम बिजुली खपत हुने, सफा गर्न झन्झट नहुने, किरा धमिराले नखाने र फुट्ने सम्भावना नभएको हुन्छ । त्यति मात्र नभई घाम पानी र तातो चिसोले केही फरक नपार्ने खालको हुन्छ ।
– यस प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुएको छ ?
हामीले आशा गरेभन्दा बढी राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं । प्रदर्शनी भएको पहिलो दिनदेखि आजसम्म सात हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्नुभयो होला सबैले राम्रै मानेर जानुभएको छ । भने दुई सयभन्दा बढीले त घर निर्माणको लागि नाम समेत लेखाएर जानुभएको छ । यसबाट हामी झनै उत्साहित भएका छौ ।
– तपाईहरुले घर निर्माण मात्रै हो की सामान पनि बेच्नुहुन्छ ?
हामीले घर निर्माणका लागि चाहिने सबै सामान आयात, निर्यात दुवै गरिरहेका छौं । हाम्रो सामान देशका विभिन्न जिल्लामा बिक्री वितरण गरिरहेका छौं, जस्तो अहिले गोरखा जिल्लामा हामीले उत्पादन गरेका सामानको माग बढी रहेको छ । त्यसका अलावा देशका थुप्रै जिल्लाहरुमा हामीले सामान बिक्री गरिरहेका छौ ।
– तपाईहरुले ती सामानहरु कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ?
हामीले घर निर्माणका लागि चाहिने सामानहरु मित्र राष्ट्र चीन र भारतबाट आयात गरिरहेका छौ ।
– अन्त्यमा केही भन्नु हुन्छ की ?
आम नेपाली दाुजुभाईहरुको घर निर्माणका लागि चाहिने सबै सामानहरु हामीले सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गराईरहेका छौं भन्न चाहन्छु । त्यस्तै तपाईहरुलाई घर निर्माणका लागि सामग्री दिने मात्र नभई घर निर्माण पनि एकदमै सस्तो मुल्यमा गरिदिने गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसको लागि काठमाडौंको सुकेधारामा रहेको कार्यालयमा आई थप जानकारी लिई दिनुहुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।